Idolophu encinci ehlala enokufikelela kwidolophu enkulu.
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguBrett
Ulwakhiwo olutsha, olungekalungi de kube sekupheleni kukaSeptemba 2020. Ifumaneka ngokuthe ngqo kwi-HWY 65, le ndlu ye-720 square foot ineveranda egqunyiweyo kunye neyadi yangasemva.
Singaphantsi kwemizuzu engama-30 ukusuka eDes Moines, eAltoona, eAmes, eMarshalltown, eAnkeny, naseNewton. Kwindawo yokuwasha/yokomisa, kufutshane neevenkile ezininzi zegrosari / eziluncedo, indawo yokupaka izithuthi, ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo, kwaye malunga ne-1/4 yeemayile ukusuka kwi-Heart of Iowa Trail. Ukufikelela kwi-24/7 iziko lokuzilolonga loluntu.
I-Collins ifana nokudityaniswa kweendlela kumbindi we-Iowa....ungakwazi ukufikelela kwiindawo ezininzi ngokuzonwabisa okufutshane ukuba ixesha. Lo mhlaba lulwakhiwo olutsha kraca. Intle kakhulu kwaye ikhululekile.
ICollins yidolophu enabantu abamalunga nama-500. Singaphantsi kwemizuzu engama-30 ukusuka eAmes, eAltoona, eAnkeny, eDes Moines, eMarshalltown, naseNewton. Idolophu engaphandle inezinto ezininzi zasekhaya ezinjengendawo yokubhaka, ivenkile encinci ngokubanzi, isikhululo segesi, iposi, iziko lokuzilolonga iiyure ezingama-24, ivenkile yetattoo, ibhanki, ivenkile yompu, nokunye. Kananjalo sineseti enkulu yeepaki kunye nokufikelela lula kwi-Heart of Iowa Trail.
Umbuki zindwendwe ngu- Brett
Ndiyafumaneka ukuba ndiyafuneka njengoko ndihlala kumganyana nje omfutshane.